Conda, PIP နှင့် NPM: Cross-Platform Package စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ Linux မှ
Conda, PIP နှင့် NPM: Cross-platform Package Management စနစ်
ငါတို့သိပြီးသားများများအားလုံး၊ အတွေ့အကြုံရှိ Linuxeros, ငါတို့ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ ၎င်းတို့တွင်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သောအရာတစ်ခုစီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်မွေ့နိုင်သည် ဖြန့်ဖြူး Desktop Environments တစ်ခု၊ Window မန်နေဂျာများ၊ Boot မန်နေဂျာများ၊ Login Managers များ၊ "Package မန်နေဂျာ"အချို့လူသိများကြသည်အချို့သောအရာတို့တွင် "Apt-get" နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကောင်းစွာမသိရအခြားသူများကို "ကွန်ဒို".
ဟုတ်တယ် "Package မန်နေဂျာ"ထိုစနစ်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကိရိယာများစုဆောင်းခြင်းသာဖြစ်သည် အလိုအလျောက် ဖြစ်စဉ် packages များတပ်ဆင်ခြင်း, update ကို, configuration များနှင့်ဖယ်ရှားရေး ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems မှ software များ၏။ အချို့သည်များသောအားဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်လာကြသော်လည်း၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်နှင့်ပိတ်ထားသော Operating Systems များအတွက်ဖြစ်သည် Windows ကို y MacOS.
Guix: Package Management Toolal သင်ခန်းစာ
ထို့ကြောင့်အကြား "Package မန်နေဂျာ"ပိုမိုသိရှိပြီးအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည် apt-get, တတ်လွယ်ခြင်း, apt, pacman, yumဤအသာပေမယ့်အခြားသူတွေအကြား တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းဆိုလိုသည်မှာ GNU / Linux များ။ ခေါ်သော်လည်းတစ် ဦး လည်းမရှိ Guixယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်သာမန်အားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သိနိုင်သည် GNU Distro အမည်တူ၏။ ပြီးတော့ဒီစာမူပြီးသွားရင်ဖတ်ဖို့အကြံပြုထားတဲ့အရင်စာစောင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါ။
"Guix ကို package manager အဖြစ် Guile Scheme language ဖြင့်ရေးပြီး Nix package manager ကိုအခြေခံသည်။ GNU Distribution အနေဖြင့်၎င်းတွင်အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းများသာပါဝင်ပြီး GNU Linux-Libre kernel ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းမှာအခမဲ့မဟုတ်သောပစ္စည်းများနှင့် binary firmware မှသန့်စင်ထားသည်။"
1 Conda, PIP နှင့် NPM - ၃ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ
1.1 Conda ဆိုတာဘာလဲ။
1.1.1 Conda အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
1.2 PIP ဆိုတာဘာလဲ။
1.2.1 Pip အကြောင်းအသေးစိတ်
1.3 NPM ဆိုတာဘာလဲ။
1.3.1 NPM အကြောင်းပိုမို
Conda, PIP နှင့် NPM - ၃ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "ကွန်ဒို" es:
"ကွန်ဒို" အရမ်းကောင်းတယ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကသာအတွက်လာပေမယ့် အင်္ဂလိပ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းဟုခေါ်သည် «ကွန်ဒို»အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသောနှင့် Conda အထုပ်များ software တစ်ခုကျယ်ပြန့်သည်။ နောက်ဆုံး, သူ့၌တည်၏ GitHub website ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Anaconda ဖြန့်ဖြူးခြင်း - ဒေတာသိပ္ပံအတွက်အပြည့်စုံဆုံးအစုံသည် Python နှင့်အတူ
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, « PIP » es:
“ လက်ရှိမှာ Python package ကို install လုပ်ဖို့ PyPA အကြံပြုထားတဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့် PIP သည် Python အတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သော package installer တစ်ခုဖြစ်သည်။ Python package ကို install လုပ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲ Python version များဖြင့်တင်ပို့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် PyPI နှင့်အခြား Python package indexes များမှ packets များကိုရှာဖွေခြင်း၊ download ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် install လုပ်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းကို command line interface (CLI) မှတဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများစွာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် cross-platform ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို Windows နှင့် MacOS တို့တွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။"
« PIP » ဒါ့အပြင်အလွန်ကောင်းသောရှိပါတယ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကသာအတွက်လာပေမယ့် အင်္ဂလိပ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည် «Python ကို», တစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေးပါသည် စာရွက်စာတမ်းများ။ နောက်ဆုံး, သူ့၌တည်၏ GitHub website ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "NPM" es:
"၎င်းသည် NodeJS အတွက်လွယ်ကူသော package manager တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အားအချိန်တိုအတွင်းကုဒ်တစ်လိုင်းတည်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်စာကြည့်တိုက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည် modules များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ package များဖြန့်ဝေရန်နှင့်မှီခိုမှုကိုလွယ်ကူစွာထည့်ရန်ကူညီသည်။ ။ "
"NPM" ဒါ့အပြင်ကောင်းပါတယ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများဒါကြောင့်လည်းအတွက်သာလာပေမယ့် အင်္ဂလိပ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည် «Node.JS», တစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေးပါသည် စာရွက်စာတမ်းများစပိန်ဘာသာဖြင့်လာသည်။ နောက်ဆုံး, သူ့၌တည်၏ GitHub website ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအရေးကြီးတယ် NPM တွင်ထည့်ပါ လာမည့်:
ထို့အပြင်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်၏ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Cross- ပလက်ဖောင်း၎င်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲလည်းအသုံးပြုနိုင်သည် Windows ကို y MacOS.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Conda, PIP y NPM»3 Cross-platform အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ နှင့်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများနှင့် developer များကအများအားဖြင့်လူသိများပြီးအသုံးပြုသော open source; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Conda, PIP နှင့် NPM: Cross-platform Package Management စနစ်
AWSOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော AWS Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
AWSOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော AWS Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁